Dowladda Soomaaliya Oo si adag uga hadashay weerarkii lagu qaaday Xasan Sheekh | Warbaahinta Ayaamaha
Dowladda Soomaaliya Oo si adag uga hadashay weerarkii lagu qaaday Xasan Sheekh
muqdisho-ayaamaha-Xukuumadda Soomaaliya ayaa war kasoo saartay rasaas manta lagu furay Madaxweynihii hore ee dalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Wasiirka cadaaladda XFS Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in guddi uu horkacayo taliyaha Asluubta loo saaray baarista is rasaaseyn galabta dhex martay ciidan Asluubta ka tirsan iyo ilaalada Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxaa uu sheegay in caddaaladda la marsiin doono cidwalba oo ku lugyeelata falkaasi oo ahaa mid aan lama filaan ah.
Kolonyo uu la socday Madaxweynihii hore ayaa lagu rasaaseeyay agagaarka Kawaanka Malayga ee degmada Xamar Weyne, halkaasoo bar koontarool ay ku leeyihiin Ciidanka Asluubta.
Ciidanka Asluubta ee koontaroolka ku leh bartaas ayaa dhowr jeer rasaaseeyay gawaari mas’uuliyiin iyo oday dhaqameedyo la socdeen oo u dambeeyay weerarkii gaariga Imaam Maxamed Yuusuf.